Ụzọ esi akụziri ụmụaka | Ndị Nne Taa
Alicia tomero | 24/09/2021 10:00 | Ịmụ ihe, Atụmatụ, Mmepe, Ezinụlọ
Dị ka nne na nna anyị maara mkpa na mkpa nke kuziere ụmụ anyị. Ọ na -amasị anyị ime ya na -enweghị mmejọ, mana anyị anaghị ezu oke mgbe niile, anyị makwaara na ụzọ izi ihe nwere ike ịnwe nsonaazụ dị mkpa mgbe ụmụaka toro. N'ime ndị nne taa anyị na -ekpughe ụzọ esi akụziri nwata ihe, n'ihi na dabere na nkà ihe ọmụma na akparamagwa nke ezinụlọ ọ bụla, a ga -etinye ụdị agụmakwụkwọ dị iche iche.
Ụzọ ma ọ bụ ụzọ e si akụzi bụ otu n'ime ọrụ nwere ibu ọrụ ka ukwuu nye nne na nna. A ga -eji ọtụtụ omume, iwu ma ọ bụ iwu anyị tụọ ya echiche nkatọ, n'agbanyeghị na n'ọtụtụ oge anyị anaghị enyocha ya otu a.
1 Ụzọ esi akụziri ụmụaka ihe
1.1 Mmụta mmegbu ma ọ bụ ọchịchị aka ike
1.2 Ikike mmuta
1.3 Mmụta onye kwuo uche ya
Omume anyị dị ka nne na nna yana ọchịchọ anyị ichebe ha na -edugakwa anyị inwe na -eme dị ka ndị nkuzi. Ikike anyị bụ akụkụ nke agụmakwụkwọ na nke ahụ ga -eduga anyị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ịkụziri ha ihe.
Mmụta mmegbu ma ọ bụ ọchịchị aka ike
Na-egosi a usoro izi ihe aka ike. Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ n'oge, ọ bụ ụzọ izi ihe n'ime afọ iri asatọ na iri itoolu, n'okpuru ịdọ aka na ntị anaghị enwe ndidi na obere nkwukọrịta. A naghị enwekarị mkparịta ụka n'etiti nne na nna na ụmụ na mgbe ọ dị mkpa ịkọwa ihe kpatara ya ekwetaghị.
A na -eji ụzọ “inye iwu na agụmakwụkwọ” eme ihe n'ụzọ na -ekwu na "a na -eme nke a n'ihi na m kwuru otu a", ebe ịdị mma a na -egosi na ọ bụ ụzọ aka ike. Ha bụ nne na nna ha amaghị ka esi edozi esemokwu maka na ha agụghị akwụkwọ ka esi eme ya. N'ịbụ ndị chere ọnọdụ ndị a ihu, ha chọrọ ụmụaka irube isi na iwu ha ma ọ bụrụ na ha ajụ ha na -enwe ike ịchụkwudo nwata ahụ.
Mmetụta dị ala na nrụgide dị elu maka ụmụaka iburu ibu ọrụ ka oge na -aga belata mmetụta gị. N'ikpeazụ, ụmụaka na -emesị nwee iwe na ọbụna na -emecha nwee trauma, n'ihi ya, ha na -enwe mmetụta nke ukwuu n'ebe ndị nne na nna nọ. Nke a na -eduga inwe ịgha ụgha, kọwaa nkọwa ole na ole mmetụta ha ka nne na nna ghara imegwara. N'oge ndị ọzọ, oke ịchịkwa ụmụaka na -eme ka ha bụrụ oke nchekwa, na -eme ka ha ghara ibi ndụ ahụmịhe ha n'onwe ha.
Ụzọ nkuzi a bụ nke na -abụghị mmegide. Njikwa a na-eme na-enye ohere karịa, n'ọtụtụ ọnọdụ ọ dị ụkọ nke na ọ na-adị adị. Nkwekọrịta dị bụ kpam kpam ịha nhatanha, ha na -agwa ha okwu ma mee ka ha bụrụ ndị na -eso mmetụta ha. Usoro a na -eme ka ụmụaka ghara ịghọta ụdị nkwupụta a nyere afọ ha yana ya mere enwela echiche ụdị ọnọdụ a.
O gini mere umu m anaghi erubere m isi
N'ọtụtụ ọnọdụ, ha dị oke mmetụta ịhụnanya Site n'omume ụmụaka, ka ha wee ghara imebi ndụ nne na nna ha na -arapara ime ihe ọ bụla. Mgbe ụfọdụ jupụta oghere mmetụta uche nke ụmụaka nwere ngwongwo, ma ọ bụ etinyeghị ha n'ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ n'ihi na ha kwenyere na ha adabaghị afọ ndụ ha.
N'ikpeazụ ụmụaka a na nne na nna ha nwere ụdị mmekọrịta chiri anya nke na n'ikpeazụ Ọ na -esiri ha ike iso ndị ọzọ na -emekọrịta ihe. Ha ga -enwe nsogbu ọbụna ịzaghachi ụfọdụ agwa ebe ha ga -ekwenye n'iwu. Mweghachi ọzọ nwere ike ime bụ ka ha na -etolite, ebe ọ bụ na ha chọrọ iji ndụ kpọrọ ihe na ezigbo echiche nke ahụ nwere ike ọ gaghị eru gị aka.
Mmụta onye kwuo uche ya
Na nke a nne na nna nwere nchịkwa dị ukwuu nke ọnọdụ. Ha ga -enwekwa mmetụta ịhụnanya, mana ha ga -adịtụ obere mgbanwe, ịtụle ibu ọrụ na ha ga -erubere ya isi dabere n'afọ nwata ahụ. Ndị nne na nna na -etinye aka n'ụzọ zuru oke na ọrụ ụlọ ụmụaka ma nwee ọtụtụ nkwukọrịta na -emetụ n'ahụ, na -eji nsogbu na nghọta zuru oke edozi nsogbu gị.
N'ikpeazụ, ụmụaka ndị a ga -agụ akwụkwọ nwere ọkwa dị elu nke njide onwe onye a gaghịkwa emebi ùgwù onwe gị. Ha ga -enwe ike ịnagide ọrụ ha na ọrụ ha nke ọma na nnwere onwe ka ukwuu. Ha ga -abụkwa ndị na -apụ apụ, ndị na -akwanyere ugwu na nghọta gbasara mmekọrịta gị.
Echefula na ụzọ izi ihe amụrụ site na onye ọ bụla n'ime anyị na n'ọtụtụ ọnọdụ ebumnuche anyị bụ ime ya dịka a kuziri anyị. Ndị ikike na -agwa anyị ka ụmụaka ndị a ga -esi were ndụ ha. Ịhụnanya na ịhụnanya bụkwa ihe ndabere maka mara ka esi eto n'uju.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Mmepe » Ụzọ esi akụziri ụmụaka ihe
Ọ dị mkpa ahụike ahụike iji gbochie ọdịda ọdịda na alopecia